Gịnị Mere My iPhone Gaa Nnennen Iji Ozi olu? Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
otu esi ejikọ iphone na ịntanetị na -enweghị wifi
apple chọta nbanye ekwentị m
otu esi ebudata ngwa ahịa na ipad
Gịnị Mere My iPhone Gaa Nnennen Iji Ozi olu? Nke a bụ ndozi!
Ndị enyi gị na-anwa ịkpọ gị, mana ha enweghị ike ịgafe. Ekwentị ha na-akụ mgbe ị kpọrọ ha , yabụ gịnị kpatara na ọ bụghị nke gị? N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere iPhone gị ji aga ozi olu mgbe mmadụ kpọrọ oku na esi edozi nsogbu ahụ maka ezi.
Why Why My iPhone Go Straight To Voicemail Mgbe Mmadu Kpọrọ?
Gị iPhone na-aga ozi ozioma n'ihi na iPhone gị enweghị ọrụ, Edogbula nsogbu agbanwuru, ma ọ bụ melite Ntọala Ntọala. Anyị ga-enyere gị aka ịchọpụta ma dozie ezigbo nsogbu dị n'okpuru.
Ihe asaa kpatara iPhones ji aga n'ihu na ozi olu
Enwere isi ihe atọ kpatara iPhones na-aga ozio olu, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara nke mbụ. M dị njikere nzọ gị oku na-aga ogologo ka ozi olu n'ihi nke # 2 ma ọ bụ # 3.
na -egosi na ejima ọkụ gị na -eche banyere gị
Enweghị Ọrụ / Ugboelu
Mgbe iPhone gị dị oke anya iji jikọọ na ụlọ elu sel, ma ọ bụ mgbe ebipụla ya na mpụga ụwa na Ọnọdụ ụgbọelu, oku niile na-aga ozugbo na ozi olu n'ihi na iPhone ejikọtaghị na netwọk cellular.
Mgbe gị iPhone na-ekpochi (ihuenyo bụ gbanyụọ), Ekwela nsogbu ịgbachi nkịtị niile na-abata oku, ozi lerma Ọkwa, na alerts na gị iPhone. N'adịghị ka ọnọdụ ịgbachi nkịtị, Edogbula nsogbu na-eziga oku mbata ozugbo na ozi olu.
Lee anya n'akụkụ aka nri nke iPhone gị, n'akụkụ aka ekpe nke akara ngosi batrị. Ọ bụrụ n’ịhụ ọnwa ọhụụ, agbanyere nsogbu.
Wayzọ kachasị ọsọ iji gbanyụọ Adịghị Nsogbu dị na Center Control. Iji mepee Oghere Njikwa, jiri mkpịsị aka gị swipe elu na ala ngosipụta iPhone gị. Chọọ maka akara ngosi ọnwa ọhụụ, wee jiri mkpịsị aka gị kpatụ ya ka ị gbanyụọ.
I nwekwara ike gbanyụọ Ederedela na ngwa Ntọala site na ịga Ntọala -> Ekwela nsogbu . Kpatụ mgba ọkụ n'aka nri nke Enyena nsogbu iji gbanyụọ Ekwela nsogbu.
Olee Otú Not Ga-esi Nwee Nsogbu Ka Turn Tụgharịa na Mbụ?
Mepee Ntọala ngwa ma pịa Enyena nsogbu . Bụ Ndokwa agbanwuru? Ọ bụrụ otu a, iPhone gị ga - akpaghị aka Doghara ịgbanye ma gbanyụọ mgbe ị na - ehi ụra.
Ekwekwala nsogbu mgbe ị na-akwọ ụgbọala
Ihe ohuru nke eweputara na iOS 11 akpọgbula ya mgbe ịkwọ ụgbọala nwere ike ịgbanye na akpaghị aka mgbe iPhone gị chọpụtara mgbe ị na-agba ụgbọ ala.
Iji gbanyụọ Edozina gị mgbe ị na-anya ụgbọ, ị ga-ebu ụzọ gbakwunye Do not Dist Disturb while Driving to Control Center site na ịga Ntọala -> Ogwe njikwa -> Hazie njikwa na enweta na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tinyere akara aka na n'aka ekpe nke Ekwela nsogbu mgbe ụgbọala.
Next, swipe elu na ala nke ihuenyo na-emeghe Control Center na enweta na Ekwekwala nsogbu mgbe ị na-akwọ ụgbọala akara ngosi
gịnị kpatara na ọ naghị arụ ọrụ
Fọdụ ndị na-agụ kọrọ akụkọ ọhụrụ nke pụtara na nso nso a nke iOS: Gbanwee Kpọọ Oku ka Mgbe niile. Gaa na Ntọala -> Ekwentị -> Kpọọ oku , pịa Mgbe niile , ma gbalịa.
Ọ bụrụ na oku gị na-aga ogologo ozi olu, ị nwere ike mkpa imelite ntọala ụgbọelu na iPhone gị. Ntọala ndị na-ebu gị bụ ihe na-enye gị iPhone ohere ijikọ na netwọk ikuku gị.
Ọ bụrụ na ntọala gị ụgbọelu nke iPhone gafere oge, ọ nwere ike ịnwe nsogbu ijikọ na netwọk gị, nke nwere ike ibute oku ekwentị na-abata ozugbo na ozi olu gị.
I tulee maka Ntọala Ntọala ụgbọelu , mepee Ntọala ngwa ma pịa General -> Banyere . Ọ bụrụ na a ụgbọelu ntọala update dị, ihe njikere ga-egosi na gị iPhone ngosipụta na-ekwu “ Ntọala Ntọala ụgbọelu “. Ọ bụrụ na nche a pụtara na iPhone gị, pịa Mmelite .
Gbanyụọ ndị na-akpọ oku na-enweghị nkiti
Ndị na-akpọ ndị na-amaghị ihe n’ekwughị okwu ga-eziga oku site na nọmba amaghị na ozi olu ozugbo. Oku ga-egosi na Na-adịbeghị anya taabụ na Ekwentị ọ bụ ezie na ọ na-aga ogologo ozi olu.
Mepee Ntọala wee pịa Ekwentị . Gbanyụọ ngbanwe dị n'akụkụ Achọghị ịgbachi nkịtị Ndị na-akpọ oku iji gbanyụọ ntọala a.
Kpọtụrụ ụgbọelu gị
E nwere ohere na i nwere ike ịkpọtụrụ gị cell ụgbọelu banyere ihe nke na ọrụ maka azaghị ma ọ bụ ama oku. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe omume na - enweghị nsogbu nke usoro nhazi nsogbu ọ bụla n'isiokwu a, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na - eweta gị ka ị hụ ma enwere okwu ọ bụla amaara ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ụlọ elu nke ekwesịrị ime na ha ọgwụgwụ.
Ikuku Kpọtụrụ Nkwado Kpọtụrụ Number
Oge eruola ka ịgbanwee ndị na-enweghị eriri?
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na nsogbu mgbe niile na onye na-ahụ maka ikuku gị, ịnwere ike ịtụle ịgbanwe. Ga-echekwa ego buru ibu mgbe ị na-eme! Lelee ngwa ọrụ UpPhone ka tulee atụmatụ ekwentị site na ikuku ọ bụla na-ebu ikuku na United States.
Ihuenyo iphone agbachaala mana ọ ka na -aga
’Relaghachi na okporo
Gị iPhone na-akụ ọzọ na oku gị agaghị aga ozi olu. Ekwekwala nsogbu bụ atụmatụ na-abata n’aka mgbe ị na-ehi ụra, mana ọ nwere ike ibute isi ọwụwa siri ike ma ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eji ya. Zọpụta ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị isi ọwụwa yiri site na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta ka ha nwekwara ike ịmụ ihe kpatara iPhone ji aga ozi olu!